ITUNES: NJEHIE 9 - ITUNES - 2019
Otu n'ime usoro kachasị ewu ewu mgbe ị na-arụ ọrụ na vidiyo na-eme ka ha si n'otu usoro gaa na nke ọzọ. Na iji rụọ ọrụ a, ị ga-achọ ịgbanyere aka nke mmemme ọkachamara. Otu n'ime mmemme ndị a bụ SUPER.
SUPER bụ software n'efu nke isi ọrụ bụ ntụgharị vidiyo. Tụkwasị na nke ahụ, usoro ihe omume ahụ nwere ihe ndị ọzọ na-adọrọ mmasị ndị ọrụ nwere ike ịdị mkpa na usoro nke na-arụ ọrụ na ndekọ vidio.
Anyị na-akwado ịhụ: Mmemme ndị ọzọ iji tọghata vidiyo
Usoro ihe omume ahụ na-enye ndepụta sara mbara nke ụdị usoro vidiyo na ọdịyo dịnụ, nke ị nwere ike ịchọta ngwaọrụ ndị na-ewu ewu, n'ihi na ị na-elele ihe omume SUPER ma ị nwere ike imegharị vidiyo ahụ.
Ị nwere iko igwe anaglyf? Mgbe ahụ ị nwere ihe mere ị ga-eji lee ihe nkiri 3D n'ụlọ. Ọrụ dị iche iche SUPER ga-agbanwegharị 2D video na 3D.
Site n'enyemaka nke ihe SUPER, na mgbakwunye na ọrụ ntọghata, ị nwere ohere ịgbanwe usoro vidiyo site na ịhọrọ otu n'ime ndị a tụrụ aro.
Gbanwee ogo ọdịyo na-eji ntọala dị n'elu, ma ọ bụ gbanyụọ ụda kpamkpam.
Otu n'ime ọrụ ndị a ma ama nke usoro ihe omume ahụ bụ iji mee ka ọ mara na ịhọrọ koodu codec maka vidio, ihe omume ahụ nwere ndepụta buru ibu nke ndị ọkachamara ga-aghọta.
Ndozi agbazi agba
Ọ bụrụ na agba mbụ na vidio adịghị gị mma, ebe a bụ ngwaọrụ maka ịhazigharị ọkụ, ọdịiche, hue na saturation.
AHỤ NDỊ bara uru:
1. Ntọala setịpụ nke atụmatụ maka ịtụgharị vidiyo;
2. Ihe omume a bụ n'efu.
Ọghọm dị elu:
1. Ọ bụrụ na usoro nhazi ahụ anaghị ajụ oge, mgbe ahụ, a ga-arụnye ngwaahịa ndị ọzọ na kọmputa ahụ;
2. Enweghị ike ịkọ disk maka ịwụnye ihe omume ahụ;
3. Enweghị nkwado maka asụsụ Russian;
4. Iji rụọ ọrụ na usoro ihe omume ahụ chọrọ ikike nhazi.
OZU SUPER na-eme ka aha ya doo anya. Nke a bụ onye nrụpụta zuru oke na nke arụ ọrụ nke na-enye gị ohere ịrụ ọtụtụ ọrụ bara uru. Eleghi anya enweghi ihe mmemme ahu nwere interface puru iche, ma nke ahu adighi eme ka o di nma.
Download SUPER maka n'efu
Onye na-edebe ihe ntanetịime weebụ Super zoo IP Hamster Free Video Ihe Ntụgharị Nhazi Ụlọ ọrụ
SUPER bụ onye mgbagwoju vidiyo zuru ụwa ọnụ na nkwado maka usoro niile na-ewu ewu na atụmatụ nke encoder na nsụgharị.
Onye Mmepụta: eRightSoft
Version: 2015 Mee 69